နိုဝင်ဘာလ 26 ရက်နေ့တွင်,2014 ခုနှစ်,,ဇူလိုင်လ 1 ရက်နေ့တွင်ထိုသတ္တမအမျိုးသားလွှတ်တော်ကအတည်ပြုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ,2001 ခုနှစျဇူလိုငျလ 1 ရက်နေ့တွင်အကျိုးသက်ရောက်သို့ကြွလာ,2015,2005 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအက်ဥပဒေအတွက်သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကို၏အရပျ၌,အထူးသဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏တားမြစ်ချက်,အခြေအနေအရရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ.
အဖယ်အဆိုအရ(ရွေးချယ်ရေး)စုဆောင်းဖို့ 2014 ခုနှစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအတွက်နည်းလမ်း,ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏အခွအေနတွေနဲ့အခြေအနေများကိုစစ်ဆေးနှင့်သတ်မှတ်,လည်ပတ်မှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများစက်မှုလုပ်ငန်းများစာရင်းတားမြစ်သက်ဆိုင်သောတရား၏အခြေခံမူတီထွင်ဖို့ကူညီပေးခဲ့,သာဥပဒေမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခွင့်ပြုပါရန်,ဤပညတ်တရားကိုတဆင့်အခြေအနေများကိုအခမဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်ရပါမည်တားမြစ်သို့မဟုတ်မလိုအပ်ပါဘူး,အားလုံးစက်မှုလုပ်ငန်း operating.
ဗီယက်နမ်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အဆိုပြုထားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းများဗီယကျနမျရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေပုဒ်မ6အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်ပါဝင်:
(ငါ)ဤဥပဒေမှနောက်ဆက်တွဲ 1 တွင်ဖော်ပြထားသောမူးယစ်ဆေးဝါးများ;
(ii)ဤဥပဒေမှနောက်ဆက်တွဲ2တွင်ဖော်ပြထားသောဓာတုပစ္စည်းများနှင့်သတ္တုဓာတ်;
(iii)ထိုနိုင်ငံတကာရောင်းမည်အပေါ်ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များနှင့်အပင်များ၏ဝယ်ယူမှနောက်ဆက်တွဲ 1 တွင်ဖော်ပြထားသောအမျိုးမျိုးသောတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နမူနာ;သဘာဝကဇာစ်မြစ်၏အမျိုးမျိုးသောရိုင်းသောမျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိတိရစ္ဆာန်နှင့်အပင်နမူနာ၏စစ်ဆင်ရေးဤဥပဒေမှနောက်ဆက်တွဲ3Group က 1 မှာစာရင်း;
(vi)လူ့ခန္ဓာကိုယ် asexual မျိုးပွားရန်.
စုံစမ်းစစ်ဆေး 386 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်လက်ရှိဥပဒေအရနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအခွအေန၏အခြေခံပေါ်မှာလည်ပတ်,ပညတ်တရားကိုအခြေခံမူ operating ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီများစာရင်းကိုပေးပါသည်:
Plus အားအခွင့်အာဏာများနှင့်အညီအချို့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် operating အခြေအနေများပြင်ဆင်ချက်ကိုအတည်ပြုသို့မဟုတ်အတည်ပြုပေးရန်နိုင်ငံတော်၏အခွင့်အာဏာကိုလျှော့ချဖို့.အဓိကတိုင်းတာယူမှတရားဝင်ညှနျကွားခရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်မှတ်ပုံတင်ရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီများအောင်မြင်ရန်မျှော်လင့်ဖို့စံ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များထုတ်ဝေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးစစျဆေးနိုငျ.
နာမ၌တိကျမှန်ကန်မွမ်းမံပါနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် operating အခွအေနအဘို့အအချို့သောစက်မှုလုပ်ငန်းစနစ်များကိုပိုမိုတိကျမှန်ကန်နှင့်ပွင့်လင်းကြသည်ဤစာစောင်တွင်ရောင်ပြန်ဟပ်,ပုံတူကိုရှောင်ရှားဖို့နဲ့နားလည်လွယ်ကူချောမွေ့ရန်ပညတ်တရား၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များအောင်မြင်ရန်.
1.အထက်ပါအခြေခံမူ၏အခြေခံတွင်,ဤဥပဒေမှနောက်ဆက်တွဲ4မှာစာရင်း 267 စက်မှုလုပ်ငန်းများ
01/7/2016 ဥပဒေလည်းအမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခွအေနမြေား၏တည်းဖြတ်မူပေး.ထိုကွောငျ့,စက်မှုလုပ်ငန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် operating အခြေအနေများကိုသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအတွက်သတ်မှတ်ထားသောနိုင်ပါတယ်,အသီးအသီးစက်မှုလုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်ဥပဒေများအတွက်ထောက်ပံ့ပေး operating အခြေအနေအရတိကျသောအခြေအနေများ,ထုံးအဖွဲ့တော်တို့,နိုင်ငံတကာစာချုပ်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ဗီယက်နမ်နှင့်အတူသဘောတူညီခဲ့.ပညတ်တရား၏အအကောင်အထည်ဖော်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်(ဇူလိုင်လ 1,2015)အင်အားသုံးသို့ entry ကို၏နေ့စွဲကနေ,ဥပဒေစံချိန်စံညွှန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် operating စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် operating အခြေအနေများကို၏တားမြစ်ချက်ပြဋ္ဌာန်းရန်မှသက်တမ်းကုန်ဆုံးလိမ့်မည်.စက်မှုလုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအခြေအနေအရလွှတ်ပေးနောက်ဆက်တွဲ 2014 ခုနှစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေသဘောတူညီချက်ထဲမှာပါပြဋ္ဌာန်းချက်များဇူလိုင်လ 1 လျှောက်ထားရန်ဆက်လက်သင့်ပါရှိပြီး 267 မှာအသုံးပြုတဲ့အခွအေနမြေား,2016.
2014 ခုနှစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေစနစ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆက်လက်နှင့်လုံခြုံရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနိယာမ 2005 ခုနှစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအတွက်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်,ထိုစနစ်နှင့်အခြေခံမူတိုးတက်လာနေချိန်တွင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြ,အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဖြည့်ဆည်း:
ဗီယက်နမ်ပြည့်စုံ'အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာချုပ်များနှင့်အညီအားလုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအကြားတန်းတူညီမျှဆေးကုသမှုအာမခံ့ကတိကဝတ်.ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအပေါ်ရှုံးသောအခါသက်ရောက်မှုအပေါ်ဥပဒေရေးရာစံချိန်စံညွှန်းပြောင်းလဲနေတဲ့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနောက်ပြန်ယူပြီး၏နိယာမ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များတိုးတက်လာဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ပိုင်ခွင့်များကိစ္စတွင်မူပြီ.ထိုကွောငျ့,ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်စပ်ဆိုင်ကြဘူးသူကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအကြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလက်မှတ်ပြန်လာကြဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအကြားအပြန်လက်မှတ်ကိုယူနိုင်ရန်အတွက်,ပညတ်တရားမဟုတ်တဲ့ယူမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု preference ကိုမှဆုတ်ခွာခဲ့သည်-retroactive နိယာမရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အတွက်သတ်မှတ်သော.
2014 ခုနှစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနားလည်မှသိရသည်,ရိုးရှင်းသောနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏အမျိုးသားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားကြီးသောပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၏လမ်းကြောင်းသစ်ကာကွယ်,အရေးကြီးသောပြောင်းလဲမှုများကို,ရဲ့ contents များကပါဝင်ဖြည့်ဆည်း:
ဒုတိယ,ပညတ်တရားလုပျထုံးလုပျနညျးရိုးရှင်းသောဖြစ်ပါတယ်,လုပျထုံးလုပျနညျးမြားနှငျ့လုပျထုံးလုပျနညျး,သာ 15 ရက်ထုတ်ပေးကာလကိုတိုစေ,အစားထက် 45 ရက်ကနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလက်မှတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှတ်ပုံတင်ရေး၏အရှည်ဆုံးကာလ(အပိုဒ် 37).
ဖြည့်စွက်ကာ,ကျော်ကို 51 ယူနိုင်ရန်အတွက်%အထက်ပါ၏-ကျော်ကို 51 နှင့်အတူလုပ်ငန်းများသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများဖော်ပြခဲ့တဲ့%နိုင်ငံခြားအရင်းအနှီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုင်ထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏'ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်စုစည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အခွအေနမြေားအတှကျအခြေခံအဖြစ်အခွအေနနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ,ပညတ်တရားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ.အခြေအနေကို၏ကျန်,ထိုကဲ့သို့သောပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အခွအေနမြေားကိုယူသကဲ့သို့,.
စတုတ္တ,အကျင့်တရားနှင့်အညီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခွင့်သဘောတူစာချုပ်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရနေကြတယ်သောလုပ်ငန်းများ,နိုင်ငံခြားဖက်စပ် မှလွဲ.,ရှယ်ယာဝယ်ယူ,နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုယူလုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများများ၏အခြေအနေများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရှယ်ယာပမာဏ,သို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားဖက်စပ်,ဝယ်ယူရှယ်ယာ,ဖက်စပ်ရန်ပုံငွေထက် ပို. 51 ၏ကျင်းပနိုင်ရန်ပြီးနောက်%စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏မှတ်ပုံတင်ထားမြို့တော်,နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုတိုက်ရိုက်ဖက်စပ်၏အခြေအနေကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ဖြစ်ရပ်ကိုပြောင်းလဲခွင့်ပြုပါရန်ဥပဒေရေးရာဘက်,ရှယ်ယာဝယ်ယူ,နိုင်ငံခြားဖက်စပ်မြို့တော်လုပျထုံးလုပျနညျး.
ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ရန်အတွက်,ပညတ္တိကျမ်း၏ရှယ်ယာများဝယ်ယူအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အာမခံဥပဒေများကိုအတိုင်းအတာရှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်ခဲ့သည်,သောနိုင်ငံခြားဖက်စပ်ဖော်ပြထားသည်,ရှယ်ယာဝယ်ယူနှင့်ဖက်စပ်၏ mode ကို,နှင့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကလိုက်နာရမည်သောအခွအေန.
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏အစီအစဉ်၏ဆွဲဆောင်မှုအာမခံနိုင်ရန်အတွက်,မြင့်၏အရည်အသွေး-နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်း,ခေတ်သစ်နည်းပညာကို,ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်၏စကေး,ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကျေးလက်ဒေသများရှိအများအပြားန်ထမ်းများအသုံးပြုခြင်း,နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကူအညီပေးရေးစက်မှုထုတ်ကုန်များ,အမှန်တကယ်အစီအစဉ်၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူမှုရေးရှုထောင့်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု(ဆေးဘက်,ပညာရေး,သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလေ့ကျင့်ရေး,ယဉျကြေးမှု.....)ပညတ်တရားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဦးစားပေးစက်မှုလုပ်ငန်းတိုးတက်နှင့်ဦးစားပေးအခွအေနများအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်,လက်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ၏နိယာမ.ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကွိုကျဧရိယာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသမျှသောအစီအစဉ်များကိုကျော်လွှားအတွက်အလွန်အကျွံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏အမြင်များတွင်,ပညတ်တရားကုန်စည်အထူးရောင်းချခြင်းနှင့်အညီဓာတ်သတ္တုအစီအစဉ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စစ်ဆင်ရေးများအတွက်ဒေသဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းပေးထား.အဆိုပါကုန်တင် scheme ကိုအထူးအရောင်းအခွန်၏ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်.အဆိုပါ
အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုစစ်ဆင်ရေး၏ထိရောက်မှုကိုအာမခံနိုင်ရန်အတွက်,အကျိုးသက်ရောက်မှုကြီးမားဘို့ကအရေးကြီးတယ်,ကြီးမားခြင်းနှင့်သြဇာစက်မှုလုပ်ငန်းများ,ဒေသဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များ,အကျင့်တရားအခွင့်အာဏာကိုပေါင်းထည့်ပြီးပါပြီ,ပါလီမန်အသိအမှတ်ပြုရန်လုပျထုံးလုပျနညျး,အစိုးရအဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်,စည်ပင်သာယာ,ပါလီမန်၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များကတာဝန်ပေးပြည်နယ်ကော်မတီကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု,ဆက်ခံ၏အခြေခံပေါ်မှာအစီအစဉ်၏အခွင့်အာဏာများအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်အသိအမှတ်ပြု,ပါလီမန် 2010 ခုနှစ်ပြဋ္ဌာန်းချက်တချို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအကောင်အထည်ဖော်မှုအပေါ်ဥပဒေနှင့်ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်လမ်းညွှန်၏အသေးစိတျ၏သနျ့/06/19 49/2010 ခုနှစ်/QH12 အစိုးရ၏သက်ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်များအရေအတွက်နှင့်အစိုးရ 2006/06/22 108/2006/N ကĐ-ပြဋ္ဌာန်းချက်အားဖြင့်သဘောတူညီခဲ့က CP.
ဤကိစ္စကို၏ပြဋ္ဌာန်းချက်သည်ယခင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ပညတ်တရား၏စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာ contents တွေကိုတချို့၏အခြေခံပေါ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြ,အစိုးရအတရားဝင်နှင့်တိုးတက်လာနေချိန်တွင်'s ကို 2006 ခုနှစ်/08/09 78/2006/N ကĐ-က CP အရေအတွက်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအပေါ်သဘောတူညီခဲ့.ထိုကွောငျ့,ပညတ်တရားကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အလို့ငှာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ၏အခြေခံမူအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကြောင်းခိုင်မာသွား,စျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်ချဲ့ထွင်;ကုန်ပစ္စည်းများတင်ပို့ဖို့စွမ်းရည်တိုးမြှင့်,န်ဆောင်မှု,ဝင်ငွေနိုင်ငံခြားငွေကြေး;ခေတ်သစ်နည်းပညာကိုနီးစပ်,စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်တိုးတက်လာစေရန်နှင့်အမျိုးသားစီးပွားရေးစွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြည့်စွက်;နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများသည်ဤပညတ်တရားလိုက်နာရမည်,ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုင်းပြည်ရဲ့ဥပဒေများကိုလက်ခံနှင့်ဗီယက်နမ်သဘောတူညီချက်၏နိုင်ငံတကာစည်းမျဉ်းများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိပါတယ်;ဗီယက်နမ်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်'ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများလည်ပတ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံရဖို့ကတိကဝတ်မှကိုယ့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.vietnam-investment.com/my/vietnam-company-registry-2.html